थाहा खबर: 'दैनिक दुई घन्टा योग अभ्यासमा बिताउँछु'
'दैनिक दुई घन्टा योग अभ्यासमा बिताउँछु'
काठमाडौं : लामो समयदेखि दन्तरोग उपचार सेवामा योगदान दिँदै आएका चिकित्सक हुन्- बरिष्ठ ओरल म्याक्जिलोफेसियल सर्जन डा. सुवास घिमिरे।
ओम समाज डेन्टल अस्पतालमा कार्यरत डा. घिमिरे बिरामीलाई दिएर रहेको समय सामाजिक संघसंस्थालाई दिन्छन्। बिरामी जाँचपछि रहेको समयमा उनी अनुसन्धानमा आधारित विभिन्न लेख लेख्ने गर्छन्। यस्तो व्यस्तताबीच जीवन चलाइरहेका उनले आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसरी ख्याल गर्छन् त? थाहाखबरसँग डा. घिमिरेले आफ्नो फिटनेस फर्मुलाबारे यसरी बताए।
दैनिक दुई घन्टा योग
हरेक दिन बिहान ३ बजे उठिसकेको हुन्छु। उठ्नेबित्तिकै आधा घन्टासम्म उठेर नबोली उठेर बस्छु। साढे ३ बजे करिब एक लिटर पानी पिउँछु। त्यसपछि आफ्नो नित्य कर्म सकेर साढे ४ बजेपछि करिब ७ बजेसम्म योगा गर्छु। करिब ४५ मिनेट कार्डियो एक्सरसाइज गर्छु। विभिन्न खालका योग अभ्यास गर्छु।
मर्निङ वाक कहिल्यै जाँदिनँ। केही वर्ष अगाडि तौल बढेर १०३ किलो पुगेको थिएँ। तौल घटाउनका लागि मर्निङ वाक गएँ तर तौल घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गयो। त्यसपछि मर्निङ वाक जान छोडिदिएँ र घरमै योगा गर्न थालेँ। अहिले तौल ७३ किलो छ।
ब्रेकफास्टमा उसिनेको मकै
७ बजेसम्म सबै काम सकेपछि म ब्रेकफास्ट खान्छु। ब्रेकफास्टमा प्राय: उसिनेको मकै, फापरको रोटी र केही सिजनल फलफूल खान्छु। त्यसपछि भने म क्लिनिक जान्छु। करिब ११ र १२ बजेको बीचमा मेरो खाना खाने समय हुन्छ। खानामा म ब्राउन राइस र रायोको साग खान्छु। चिल्लो खानेकुरा एकदम कम खान्छु। खाना खाएपछि चाबहिलस्थित अस्पताल आइपुग्छु। दिनभर बिरामीसँगै हुन्छु। दिउँसो खाजा खाने बानी एकदम कम छ। भोकै लाग्यो भने घरबाट दुईवटा कोसा केरा ल्याएको हुन्छु, त्यही केरा र एक गिलास फ्रेस जुस खान्छु। बेलुकी खाना खान छाडेको धेरै भइसक्यो तर उसिनेको तरुल, सुन्तला र केही ड्राइ फुड भने खान्छु।
चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दा सबैले बिरामीले उपचारबाट व‌ंचित भएको देख्नुपर्ने दिन नआओस् भन्ने लाग्छ। यसले गर्दा मलाई लगाउने कुरामा भन्दा पनि बिरामीलाई नै धेरै समय दिन मनपर्छ। पोसाकको रूपमा म ब्राण्डेड कपडा लगाउन मनपराउँछु। अन्य कपडाहरूचाहिँ म सकेसम्म ब्रान्डेड कपडा भन्दा शरीरलाई सजिलो हुने कपडा लगाउन मनपर्छ। तर आफैँ कहिल्यै कपडा किन्दिनँ। परिवारले नै मेरो चाहनालाई हेरेर कपडा ल्याइदिने गर्नुहुन्छ, म त्यही लगाउँछु। सकेसम्म कलरफुल कपडा भन्दा सादा कपडा लगाउन मनपराउँछु।
नेताले जस्तो भाषणचाहिँ हाम्रो पेसामा गर्नुपर्दैन तर कहिलेकाहीँ केही कार्यपत्र तथा विषयगत विषयमा प्रस्तुति दिनुपर्दाचाहिँ हल्का तयारी तर्छु। तर विषयगतभन्दा अन्य भाषण गर्नुपरे जुन बेला बोल्ने हो, त्यहीँको माहोल हेरेर गर्ने गर्छु।
'घुम्न विरलै निस्कन्छु'
विगत केही वर्षयता मैले घुम्ने समय एकदम कम मिलेको छ तर केही समय अगाडि कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जाने मौका मिलेको थियो। यही बेला मिलाएर परिवारलाई लिएर गएको थिएँ। यस्तै, कार्यक्रममा विदेश जाँदा पनि म समय मिलाएर गएको ठाउँमा रहेका केही रमाइला ठाउँहरू हेर्न जाने गर्छु।
म सामान्य खालको सेट प्रयोग गर्छु। फेसबुक एकदम कम प्रयोग गर्छु। अन्य मोबाइलका एप्लिकेसन कमै प्रयोग गर्छु। सेवलरेटको गाडी चढ्दै आएको छु। टिभी एकदम कम हेर्छु। बेलुकी र बिहानको समयमा पुस्तक तथा अन्य लेखहरू लेख्ने गरेको छु।